Gịnị bụ refractive ịwa ahụ | Bezzia
Kedu ihe bụ ịwa ahụ refractive?
Nke Torres | 13/05/2022 14:00 | Ndụmọdụ gbasara ahụike, Ọrịa
Ruo afọ ụfọdụ, ndị nwere nsogbu ọhụụ enwewo ike ịmalite ịwa ahụ refractive iji mezie ha ma kpochapụ enyo ma ọ bụ lensị kọntaktị ruo mgbe ebighị ebi. Ịwa ahụ na-atụgharị uche nwere otu ntinye aka ma ọ bụ usoro ịwa ahụ nke na-edozi ma ọ bụ kpochapụ ụfọdụ nsogbu na-akpata mgbanwe ọhụụ. Dịka ọmụmaatụ, myopia, astigmatism, hyperopia na ọbụna taa presbyopia nwekwara ike mezie.
Enyemaka zuru oke maka ndị chọrọ, chọrọ ma ọ bụ chọrọ ịkwụsị iyi iko, ma ọ bụ maka ọkachamara, egwuregwu ma ọ bụ naanị ihe ịchọ mma. N'ihi na iko bụ ihe mara mma nke ukwuu, ngwa na-atọ ụtọ nke na-agbakwụnye ọbụna àgwà na ihu, ma maka anyị niile bụ ndị ga-eyi ha kwa ụbọchị, ha abụghị ihe ọ bụla karịa ihe ncheta na-enweghị ha, anyị na-efunahụ anyị.
1 ịwa ahụ refractive
1.1 Laser refractive ịwa ahụ, LASIK ma ọ bụ PKR
1.2 A pụkwara iji oghere intraocular mee ihe
1.3 Kedu ka m ga-esi mara ma enwere m ike ịwa ahụ?
ịwa ahụ refractive
Enwere ụdị ịwa ahụ ntugharị dị iche iche iji mezie nsogbu ọhụụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-abụ ọkachamara na-ekpebi nke kachasị mma na ọbụna ihe karịrị otu usoro nwere ike itinye n'otu oge n'otu onye ahụ. Ọzọ anyị na-agwa gị Kedu ụdị ịwa ahụ refractive, mgbe a na-eji ha na otu esi eme usoro ahụ.
Laser refractive ịwa ahụ, LASIK ma ọ bụ PKR
Mgbe a na-eji laser emezi mgbanwe nke anya na-akpata nsogbu ọhụụ, ihe ọ na-eme bụ imezi ọdịdị nke cornea ka e wee mezie diopters nke na-egbochi ọhụụ ziri ezi. Ọdịdị nwere ike ịdị iche dabere na ngụsị akwụkwọ nke onye ọrịa ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji usoro LASIK, a na-eme ihe ndị a.
Iji dozie myopia: ihe a na-eme bụ ịgbatị curvature na laser, ya mere ìhè na-elekwasị anya n'ụzọ ziri ezi na cornea.
N'ihe banyere hyperopia: N'okwu a, a na-akpụzi akụkụ nke cornea iji mepụta ntụgharị.
maka astigmatism, Ihe a na-eme bụ ịgbatị ebe ahụ na akụkụ kachasị ukwuu nke cornea iji hapụ ya ka ọ bụrụ otu dị ka o kwere mee.
N'ihe banyere ịwa ahụ nke a na-akpọ PKR refractive, usoro ahụ ọ dị otu a mana ọ na-akpasu onye ọrịa iwe. Ọ bụ usoro mbụ eji emezi nsogbu ọhụụ, yabụ taa emeela ka ọ dịkwuo mma, ya mere a naghịzi eji ya eme ihe ugboro ugboro.
A pụkwara iji oghere intraocular mee ihe
N'ọnọdụ ụfọdụ, kama iji laser iji gbanwee cornea ma melite ọhụụ, enwere ike ịkụnye oghere ma ọ bụ wepụ oghere ahụ, dabere na mkpa nke onye ọrịa ọ bụla. Nke a bụ usoro a na-ejikarị eme ihe mgbe onye ọrịa nwere ọtụtụ diopters karịa ka ekwenyere ịrụ ọrụ ịwa ahụ laser refractive. N'ihe gbasara ntinye oghere, a na-echekwa oghere ahụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, a na-ewepụ oghere ahụ wee tinye oghere aphakic, nke bụ usoro a na-eji wepụ cataracts.
Kedu ka m ga-esi mara ma enwere m ike ịwa ahụ?
Iji nwee ike ịwa ahụ na-atụgharị uche n'ọnọdụ ọ dị mkpa iji dozie ntụpọ ọhụụ, dị ka myopia, astigmatism ma ọ bụ hyperopia, onye ọrịa ga-ezute ụfọdụ paramita. N'otu aka, ngụsị akwụkwọ ga-akwụsi ike ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ. A na-enyochakwa ihe nchekwa ndị ọzọ nke ọkachamara ga-enyocha ya na nke ọ bụla.
Ụzọ kachasị mma isi dozie obi abụọ gị niile bụ ịga na ndụmọdụ onye ọkachamara nwere ike ịme nyocha ma kọwaa nhọrọ gị. Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ paramita ndị a na-enyocha na nke ọ bụla, mkpa nke onye ọrịa ọ bụla na ohere nke inweta nsonaazụ achọrọ nwekwara ike ịdị iche na nke ọ bụla. E wezụga nke ahụ, Ọ bụ ezie na ọ bụ ịwa ahụ dị oke nchebe, ọ bụghị na-enweghị mmetụta ọ bụla. nke kwesịkwara iji kpọrọ ihe. Tinye onwe gị mgbe niile na ezigbo aka, dozie obi abụọ niile. Hapụ oge ụfọdụ nke ị nwere ike ịtụgharị uche wee kpebie mgbe, otu na onye ịchọrọ ịwa ahụ iji kpochapụ nsogbu ọhụụ ruo mgbe ebighị ebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ọrịa » Kedu ihe bụ ịwa ahụ refractive?
Mkpụpụ a na-egbutu na-emeghachi azụ n'oge okpomọkụ a